Boeny: am-perin’asa amin’izay ny Vovonan’ny seha-pihariana Lojy | Région Boeny
Boeny: am-perin’asa amin’izay ny Vovonan’ny seha-pihariana Lojy
25 mars 2016 A La Une, Actualité
Ho voafehy tanteraka amin’izay ny seha-pihariana Lojy na Mainty maso na Black eyes eto amin’ny faritra Boeny.
Ny volana febroary 2016 no nivoaka ny lalànam-paritra mikasika ity seha-pihariana Lojy ity. Lalàna izay mamaritra ireo fitsipika tokony harahina, ny fanatanterahana ny paik’adim-paritra ary mandrindra ny fifandraisan’ireo samy mpisehatra.
Ny alakamisy 18 martsa 2016 teo kosa, ny fifidianana ireo mpikambana ao amin’ny birao mpitantana ny Vovonan’ny seha-pihariana Lojy eto amin’ny faritra Boeny, notanterahina tao amin’ny trano fivoriana Bloc Administratif Ampisikina Mahajanga.
Fifidianana mangarahara natrehan’ireo mpisehatra maherin’ny 70 manerana ny faritra no natao. Lany ho filohan’ny vovonana Atoa Ratsirahonana Tanjakiniaina Ditra, mpanangom-bokatra avy ao Ambatoboeny. Birao telo no mandrafitra ny vovona dia ny fivoriam-be, ny birao mpanatanteraka, ny birao tekinika.
Ny tombotsoa iombonana ho an’ny Faritra sy ny Kaominina hoy izy no lahara-pahamehana, fa indrindra indrindra ho an’ireo mpamboly sy ireo ratsa-mangaika rehetra ao anatin’ny vovona.
Fomba iray ahafahana mametraka ireo mpisehatra rehetra eo amin’ny toerana iray tsy misy fitongilanana ity vovonana ity hoy kosa ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar ary ny fiarovana ity seha-pihariana ity no tanjona voalohany nametrahana io rafitra io hoy izy. Nanatrika sy nandray anajra tamin’ny fifidianana moa ny tenany sy ny Lehiben’ny distrikan’Ambatoboeny ary ireo Ben’ny Tànana anatin’io distrika io.
Ny fampandrosoana eo amin’ny lafiny toe-karena vokatry ny fomba fiasa vaovao ho matianina kokoa no andrandraina amin’izao fananganana ny vovonana izao. Satria dia anisan’ireo vokatra mandeha eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny Lojy, izay anisany sangany etoBoeny.
Ilaina araka izany ny fiarovana azy satria misy ireo mpamotsy vola no mandrebireby ny tantsaha amin’ny alalan’ny fividianana ireo vokatra amin’ny vidiny mihoa-papana. Fihetsika izay manimba ny lalam-barotr’ireo mpanangom-bokatra ara-dalàna ary mitarika ireo mpamokatra amin’ny tsy fahamatorana ara-pihariana.
Fandaharam-potoana voalohany naroson’ny filoha vaovaon’ny vovonana moa dia ny hanamari-toerana ny vidin’ny Lojy iray kilao ho 1500ariary miala eny amin’ny mpamboly, raha nitsingevana teo amin’ny 1000ar hatramin’ny 2000ar izany teo aloha.